Raharaha angidim-by tetsy Mahamasina :: Voasazy handoa onitra folo tapitrisa ariary ny mpanao gazety roa • AoRaha
Raharaha angidim-by tetsy Mahamasina Voasazy handoa onitra folo tapitrisa ariary ny mpanao gazety roa
Nivoaka omaly ny didim-pitsarana momba an’ilay fampitam-baovao tsy marina nitorian’ny Tafika malagasy ny talen’ny famoahana gazety “Le Quotidien” sy fahitala­v­i­tra “Mbs”, miampy ny mpanao gazetin’ny tranonkala “24h Mada” sy tompon’andraikitry ny serasera iray ary Tale avy ao amin’ny Kaominina Anta­nanarivo renivohitra (CUA).
Nosazian’ny Fitsarana handoa onitra folo tapitrisa ariary ny talen’ny famoahana gazety ao amin’ny “Le Quotidien” sy “Mbs” ary ilay mpanao gazety iray avy ao amin’ny tranonkala “24h Mada”. Afaka madiodio kosa ireo tompon’andraikitra roa avy ao amin’ny CUA.
Tsiahivina fa ny fampitam-baovao tsy marina momba an’ilay fipetrahana angidim-by, tetsy Mahamasina, tamin’ny fiomanana mialoha ny fiva­hinianan’ny Papa Fransoa teto Madagasikara no niampangana azy ireo. Namoaka fanambaràna nandiso ny fampitam-baovao navoa­kan’ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo momba « ny fisiana Sinoa tao anatin’ny angidim-by misy ny sary famantarana ny Tafika malagasy saika nanao tombana amin’ny fanamboarana ny kianjan’i Mahamasina » ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Niakatra Fampanoa­vana tamin’ny 2 septambra lasa teo ny raharaha. Tamin’ ny alatsinainy 16 septambra kosa no notsaraina tetsy amin’ ny lapan’ny Fitsarana Anosy ireo voampanga miisa efatra.
Fitsirihana tampoka :: Orinasa iray tratra nangalatra herinaratry ny Jirama